Waad Ku Mahadsan Tahay Ictiraafka Maanta, Indy! | Martech Zone
Bishii Febraayo waxaan soo jiitay qaar ka mid ah habeenkii oo dhan iyo dhamaadka usbuuca anigoo iskaa wax u qabso ugu shaqeeya Guddiga Superbowl 2012. Pat Coyle ayaa i soo wacay markii ay kor u sii kacaysay waxaana la ii tamariyay inaan fuulo isla markaana aan siiyo xoogaa hagid ah (iyo xoogaa horumar ah) si aan isugu geeyo a bulshada iyo olole raadinta taasi waxay heli doontaa magaca Indianapolis dhammaan shabakadda oo ah magaalada la doorto.
Goobta ayaa sidoo kale laga soo ururiyey waxyaabaha laga sifeeyey dhamaan shabakadaha iyo bogagga warbaahinta maxalliga ah si loogu sii hayo dadka deggan Indy illaa taariikhda horumarka mashruuca. Waxay ahayd mashruuc abaal marin la yaab leh iyo koox fantastik ah oo uu hoggaaminayo Mark Miles. Qof kastaa wuu qaybsamay wuuna guulaystay… waana samaynay! Mark waa hal meel oo hogaamiye ah - wuu yaqaana sida loo sameeyo koox, ka saaro caqabadaha guusha, iyo inuu awood u siiyo dadkiisa si ay u gutaan shaqada.
Maanta, waxaan ka helay huurada quruxda badan Michael Karnuta, Madaxweyne kuxigeenka Horumarinta Ganacsiga ee Shirkadda Isboortiga ee Indiana caawimada aan siiyay. Huuradu dhab ahaantii waxay leedahay gabal dhab ah oo ka mid ah RCA Dome dusheeda, aad u qabow!
Haddii aadan aqoon u lahayn Shirkadda Isboortiga ee Indiana oo aad ku nooshahay halkan, waxaad u baahan tahay shaqsiyan kubiir ururka iyo waxa aad hesho shirkaddaada inay xubin ka hesho, sidoo kale! Waxaan haynaa tan dhacdooyin ah oo imanaya Indianapolis tobanka sano ee soo socota iyo haddii aad rabto inaad dib ugu celiso gobolka sidoo kale aad hesho aqoonsi weyn - kani waa kooxda ku soo biirta!
Shirkadda Isboortiga ee Indiana
Kooxda xubinnimada Indiana Sports Corporation waxay u adeegtaa sidii dhiirrigelinta soo jiidashada dhacdooyinka waaweyn ee Indiana iyo siinta fursado gaar ah dhallinteenna. Ku darsigaaga canshuurta laga jari karo wuxuu kaloo la yimaadaa dhowr faa iidooyin ah. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid xubinnimada ISC, fadlan la xiriir Mike Pruzin oo ah member@indianasportscorp.com ama (317) 237-5020.
Mahad gaar ah ayaan u leeyahay Michael oo maanta waqti iga qaatay inuu i arko. Mike wuxuu ahaa mid aad u sharaf badan oo muujiya mahadcelintiisa aniga ee dadaalka, fulinta iyo hogaaminta aan sii wado ee ku wajahan horumarinta gobolka. Wuxuu ku tuuray boorso jajab ah oo loogu talo galay in lagu duugo si uu u asteeyo saameynta aan ku yeeshay dab shidid mashruuca hoostiisa. Waan ku faraxsanahay kaqeyb qaadashadeyda helitaanka Superbowl (hubaal… Peyton iyo Irsay ayaa laga yaabaa inay sidoo kale caawiyeen) waana ku mahadsan yahay saaxiibtinimadayda joogtada ah ee aan la leeyahay Pat Coyle si aan fursadahaas u furo
Waxaan rajeynayaa inaan la socdo Michael iyo hogaamiyeyaasha kale ee si adag u shaqeynaya si aan u keeno dhacdooyin waaweyn oo isboorti gobolka! Adiga oo ah dad ka baxsan Indianapolis - Uma jeedo inaan ku ciirsado magaaladeena, laakiin waa magaalo weyn oo leh saldhig ganacsi oo aad u wanaagsan. Xagee kale oo aad tabaruc ku sameyn laheyd oo aad ku booddaa si aad uga caawiso helitaanka Superbowl?!
Tags: 2012 super baaquliindianapoliscalaamadee maylqubbad rcasuper warbaahinta bulshadaqurux badan
Jun 14, 2009 saacadu markay ahayd 9:30 AM
Hambalyo. Bulshadan ayaa nasiib u leh inay ku hesho!